एक सशस्त्र आक्रमण क्यानाडा गुप्त विनिमय मा प्रतिबद्ध थियो - Blockchain समाचार
एक सशस्त्र आक्रमण क्यानाडा गुप्त विनिमय मा प्रतिबद्ध थियो
क्यानाडा गुप्त विनिमय मा एक सशस्त्र आक्रमण
मंगलबार, जनवरी 23, 2018, वरिपरि 11 छु, तीन सशस्त्र डाँकुहरूको ओटावा मा क्यानाडा Bitcoins कार्यालय प्रवेश र विनिमय चार सदस्य आक्रमण. तिनीहरूलाई भइरहेको जडान र एक पेस्तोल संग खतरा, अपराधीहरूलाई तिनीहरूलाई विनिमय को धन स्थानान्तरण गर्न माग. पाँचौ कर्मचारी, जो unnoticed बाँकी, प्रहरी भनिन्छ, र डाँकुहरूको केही संग भागे.
एक suspects को, ओटावा एक 19 वर्षीया निवासी, detained थियो. उहाँले हातहतियारको र forcible अवधारणा प्रयोग संग चोरी को आरोप थियो. को ओटावा प्रहरी अपराध मा थप दुई सहभागीहरू खोजिरहेको.
सीबीसी समाचार को क्यानाडा संस्करण रिपोर्ट को डाँकुहरूको को गुप्त मुद्रा मा नगद खोजे कि.
यो Cryptocurrency को धारकों पहिलो आक्रमण छैन. नोभेम्बर मा, नयाँ जर्सी को एक निवासी, लुइस Metz, प्रसारण मालिक आक्रमण. बन्दूक खतरा, उहाँले सिकार मोबाइल फोन र निजी कुञ्जीहरू टाढा लिए, जसमा उनले डिजिटल वालेटमा पहुँच गर्न प्रयोग. फलस्वरूप, उहाँले चोरेछ एक $ 1.8 लाख गुप्त मुद्रा. को offender सम्म सामना 25 जेलमा वर्ष.
अमेरिकी गुप्तचर एक परियोजना Bitcoin छ ?
अर्जेन्टिना बैंक becom ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 25 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:को गणितज्ञ लागि Bitcoin को मूल्य गणना 2018